२० भारतीय सनिकको मृ’त्युलगत्तै चीनले चाल्यो फेरी यस्तो ठुलो कदम, भारतको रुवाबासी, विश्व नै चकित — Sanchar Kendra
१ब्राजिलमा एकैदिन ३ हजार ७७४ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
२हावाहुरी,चट्याङ र मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन महाशाखाकाे निर्देशन
३काठमाडाैंमा सबै विद्यालय बन्द हुँदै, केहि बेरमै सूचना सार्वजनिक गर्दै महानगर
४आज कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने
५अमेरिकाले रुसी संस्था र अधिकारीमाथि लगायो प्रतिबन्ध
६नेपाली बजारमा बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
७संक्रमणको जोखिम भएकाेले यी १४ जिल्लामा ,विद्यालय नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
८नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ को मृत्यु
९गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
१०मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी राष्ट्रिय अनुसन्धानका दुई कर्मचारीको मृत्यु
११गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ कहिलेसम्म सुरक्षित ?
१२सिंहदरबार भित्रैबाट प्रहरीले कसलाई गर्यो पक्राउ
२० भारतीय सनिकको मृ’त्युलगत्तै चीनले चाल्यो फेरी यस्तो ठुलो कदम, भारतको रुवाबासी, विश्व नै चकित
काठमाडौं । चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँगको ल’डा’ईमा आफ्ना २० सैनिकको मृ’त्युपछि हल्लिएको भारतलाई चीनले अर्को ठुलो झट्का दिएको छ । चीनले लद्दाखमा भारतीय सेनासँग हिं’सा’त्मक भि’ड’न्त भएलगत्तै अर्को कडा कदम चालेपछि भारतभर रुवावासी चलेको छ।
चीनले लद्दाखमा भारतीय सेनासँग हिं’सा’त्मक भि’ड’न्तसँगै चिनियाँ सेनाले हिमालय क्षेत्रमा युद्ध अभ्यास तीव्र पारेको छ । सोमबार राती लद्दाखमा २० जना भारतीय सैनिक मा रिने गरी भएको हिं’सा’त्मक भिडन्तसँगै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको तिब्बत कमाण्डले सैन्य अभ्यास गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले लामो दूरीको आर्टिलरी प्रणाली, जमनीबाट हावामा मार हान्ने मिसाइल सिस्टम, विशेष अप्रेटिभ फोर्स, आर्मी एभिएशन फोर्स, इलेक्ट्रिक काउन्टरमर्स फोर्स, इन्जिनियरिंग तथा एन्टी केमिकल वारफेयरको यु’द्ध अभ्यास गरेको छ। समुद्र सतहदेखि ४७०० मिटरको उचाईमा यो अभ्यास गरिएको टाइम्सले जनाएको छ। अभ्यासमा हजारौं सैनिक तथा ट्ंयाक सहभागीरहेको जनाइएको छ।
कसरि घट्याे घ’टना ?
सुरुमा भारतीय सेनाले झडपमा एक जना कर्णेलसहित ३ जना भारतीय सैनिकको मृ’त्यु भएको बताएको थियो । मंगलबार राति भारतीय सेनाले एक वक्तव्यमार्फत झ’डपमा गम्भीर घाइते भएका अन्य १७ जना सैनिकको मृ’त्यु भएको जानकारी दिएको हो । चिनियाँतर्फको क्षति भने यकिन हुन सकेको छैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतीय सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ पक्षबाट ठूलो संख्यामा हताहत भएको उल्लेख गरेका छन् । घटनालाई लिएर भारत र चीन दुवैले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् ।
करिब १४ सय फिटको उचाइमा रहेको लेह–लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी आमनेसामने भएका हुन् । एसियाका दुई ठूला आ’ण’विक मुलुकबीच यो स्तरको हिं’सा’त्मक झ’ड’प विगत ४५ वर्षकै पहिलो हो । यो घटनाले दुई देशबीच यु’द्ध हुन सक्ने भय पनि सिर्जना गरेको छ । चीनले एकतर्फी रूपमा ‘यथास्थितिको अवस्था’ मा परिवर्तन गर्न खोज्दा सोमबार साँझदेखि रातिसम्म हिं’सा’त्मक झ’डप भएको भारतले जनाएको छ । झ’ड’पमा कर्णेलसहित तीन जनाको तत्कालै र गम्भीर घाइते १७ सैनिकको पछि मृ’त्यु भएको भारतीय सेनाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
शून्यभन्दा कम तापक्रम र हाई अल्टिच्युडका कारण घाइतेहरूको मृ’त्यु भएको सेनाले जनाएको छ । ‘माथिल्लो तहमा भएको सहमतिलाई चिनियाँ पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना गरिदिएको भए दुवै पक्षमा हताहत हुने गरी भएको झडप रोक्न सकिन्थ्यो,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीनले भने भारतीय पक्षले अनधिकृत रूपमा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सहमति उल्लंघन गरेकाले झडप भएको दाबी गरेको छ । चिनियाँ सेना पीएलएका पश्चिम क्षेत्र कमान्डका प्रवक्ता झाङ सुइलीले भारतीय सेना गलवन उपत्यकामा ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलएसीनाघेर सुनियोजित रूपमा उत्तेजक आक्रमणमा ओर्लेकाले भीषण झडप भएको जनाएका छन् ।
कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर नेपालसँगको सम्बन्धमा तनाव खेपिरहेको भारतको सीमाकै विषयलाई लिएर अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण बनेको छ । भारत र चीनबीच चार हजार किलोमिटरभन्दा लामो सीमा छ । केही भूभागमा दुई मुलुकबीच दशकौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।
सीमालाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो । करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ । कतिपय भूभाग दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । भारतका तर्फबाट संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने अन्य ठाउँमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पोलिस आईटीबीपी ले नै सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ ।
भारतले भने आफ्ना सैनिक आफ्नैपट्टि रहेको बताएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त स्याटेलाइट तस्बिरहरूलाई आधार बनाउँदै दुवै पक्षबाट एलएसीको नजिकै सडक र टेन्ट बनाइरहेको खुलासा गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लद्दाखका तीनवटा स्थानमा दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी सिक्किमको नाकुला क्षेत्रमा पनि दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको बताइएको छ । यसअघि विवादका कारण सीमामा खटिएका सैनिकहरूबीच हिं’स्र’क झ’ड’भएका तस्बिर सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको थिएन ।
तर सोमबार फेरि अचानक दुई पक्ष आमनेसामने भएका हुन् । यो घटना भने पूर्वी लद्दाखको गलवन उपत्यकाको हो। भारतीय रक्षा स्रोतको भनाइमा कर्णेल सन्तोष बाबु एउटा सानो टुकडीसहित सोमबार साँझ गलवन उपत्यकाको १४ नम्बर बिन्दुमा परिस्थिति अवलोकन गर्न पुगेका बेला चिनियाँ पक्षले घेराउ गरेर आ’क्रमण गरेको थियो । त्यसपछि सहयोगका लागि भारतीय पक्षबाट थप जवान पुगे र दुई पक्षबीच हिं’सा’त्मक झ’डप हुन पुगेको हो । स्रोतका अनुसार झ’ड’प छ घण्टासम्म चलेको थियो । त्यसक्रममा केही भारतीय सैनिक भीरबाट खसेको बताइएको छ । भारतले चीनतर्फबाट पनि ठूलो संख्यामा हताहत भएको दाबी गरे पनि मंगलबार साँझसम्म यकिन हुन सकेको छैन ।
चीन र भारतबीचको हालको तनावलाई भूराजनीतिक द्व’न्द्वका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय भारतले अमेरिकालगायत मुलुकहरूसँग हिमचिम बढाउँदै लाँदा चीन असन्तुष्ट बन्दै गएको थियो । आफूलाई घेर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकासँगै अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसियालगायतसँग नजिकिएकामा चीन भारतसँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीन भारतसँग थप रुष्ट भएको थियो ।
आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै आएको अक्साई–चीनलगायत क्षेत्र नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भन्दै चीनले तत्कालै विरोध जनाएको थियो । भारतीय विश्लेषकहरूले चीनले सीमा विवादलाई लिएर बढी आ’क्रा’मक रूप लिनुका पछाडि भारतप्रतिका यिनै असन्तुष्टिको नतिजाका रूपमा हेरेका छन् । र, पछिल्लो घटनाक्रमले यी दुई छिमेबीचको अविश्वास थप बढाउने उनीहरूको दाबी छ ।
ब्राजिलमा एकैदिन ३ हजार ७७४ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
हावाहुरी,चट्याङ र मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन महाशाखाकाे निर्देशन
काठमाडाैंमा सबै विद्यालय बन्द हुँदै, केहि बेरमै सूचना सार्वजनिक गर्दै महानगर
संक्रमणको जोखिम भएकाेले यी १४ जिल्लामा ,विद्यालय नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ को मृत्यु
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी राष्ट्रिय अनुसन्धानका दुई कर्मचारीको मृत्यु
गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ कहिलेसम्म सुरक्षित ?